‘पाँडे’लाई जन्मदिनमा जिग्रीको शुभकामना, नवप्रेमी काउलीको दह्रो ख्याल गर्नुहोला भन्न चाहन्छु !! – Waikhari
गृहपृष्ठ मनोरञ्जन ‘पाँडे’लाई जन्मदिनमा जिग्रीको शुभकामना, नवप्रेमी काउलीको दह्रो ख्याल गर्नुहोला भन्न चाहन्छु !!
‘पाँडे’लाई जन्मदिनमा जिग्रीको शुभकामना, नवप्रेमी काउलीको दह्रो ख्याल गर्नुहोला भन्न चाहन्छु !!
वैखरी मिडिया प्रा लि को तर्फ बाट पनि कलाकार अर्जुन घिमिरे ” पाँडे ” लाइ अथाह सुभकामना जन्मदिनको !!
सामाजिक सञ्जालमा चर्चित कलाकार तथा शुभचिन्तक र आफन्तहरूले उनलाई शुभकामना दिएका छन्।
चर्चित हास्यश्रृखंला भद्रगोलमा वृद्धको अभिनय गरेर चर्चित भएका पाँडे असोज ९ गते नुवाकोटको ओखरपौवा गाविस वडा नं ४ मा ३३ वर्ष पहिले जन्मिएका हुन्। केही समय उनले सैनिक जीवनसमेत बिताएका थिए। घिमिरेकी श्रीमती सुनिता मल्ल हुन् भने एक सन्तान छन्।
जन्मदिन विशेष के छ? जावफमा पाँडे भन्छन्, ‘केही छैन। भद्रगोल छायांकनका लागि बिहानै यतातिर (मुड्को भञ्ज्याङ) आएको छु। सामाजिक सञ्जाल र फोनमा शुभकामनाहरू आइरहेका छन्। उहाँरूरुको माया शुभकामना नै मेरा लागि विशेष हो।
श्रीमतीको तर्फबाट के पाउनु भयो त ? उनले भने, ‘माया अनि शुभकामना। त्योभन्दा बढी के चाहियो र!?
कलाकारितासँगै सामाजिक सेवामा पनि सक्रिय घिमिरेले गत वर्ष पाँडेजिग्री प्रतिष्ठानबाट सप्तरीका नेत्रहीन तीन परिवारलाई आवास निर्माण गरिदिएका छन्। धुर्मुस–सुन्तलीको पहरी वस्ती, सिन्धुपाल्चोकको गिरानचौर वस्ती, महोत्तरीको मुसहर वस्ती, रौतहटको सन्तपुर वस्तीदेखि लिएर वीर अस्पताल सरसफाइसम्म उनले उपस्थिति जनाएका छन्।
उनलाई जन्मदिनको शुभकामना दिँदै कुमार कट्टेल जिग्रीले आफ्नो अनन्य मित्रका साथै कलाकारिता क्षेत्रको गुरु भएको बताएका छन्।
सामाजिक सेवाभाव बोकेका उर्जाशील व्यक्तित्व घिमिरेलाई कर्मस्थलमै (भद्रगोल छायांकन स्थल) शुभकामना दिन पाउँदा खुसी लागेको बताउँदै जिग्रीले उनलाई केही सुझावसमेत दिएका छन्।
मनमा तुष र रिस लामो समयसम्म नपाल्ने पाँडेको स्वभाव असल भए पनि कतिपय अवस्थामा छिटो आवेगमा आएर निर्णय गर्ने बानी खराब भएको बताए। ‘कुनै परिस्थितिमा शान्त रहेर बस्दा दीर्घकालीन रूपमा सुुखद् हुने भए पनि अर्जुनजी कहिलेकाहीं घटनास्थलमै आवेगमा आउनु हुन्छ,’ जिग्रीले भने।
राम्रोसँग नसोची गर्ने काम र निर्णयले कहिलेकाहीं ठूलै हानी पनि हुन सक्ने भएकाले संयमता अपनाउन पाँडेलाई जिग्रीको सुझाव छ।
त्यस्तै भद्रगोलका कलाकार कक्रोज् अर्थात् हरिश निरौलाले काउली बुढीको लभमा परेको पाँडे सोल्टीलाई बधाई दिएका छन् भने अर्जुन घिमिरेलाई चाहिँ जन्मदिनको शुभकामना दिएका छन्।
‘मेरो कलाकारिताका गुरुसमेत हुनुहुन्छ उहाँ। मलाई कलाकारिता अगाडि बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु हुने अर्जुन घिमिरेलाई जन्मदिनको शुभकामना छँदैछ। त्यसमाथि अचेल भद्रगोलमा पाँडे सोल्टीको काउली बुढीसँग भर्खर-भर्खर लभ परेको छ। नवप्रेमीलाई आफ्नो प्रेमिका काउलीको दह्रो ख्याल गर्नुहोला भन्न चाहन्छु (लामो हाँसो)।
यता सागर लम्साल ‘बले’ पनि पाँडे सोल्टीको जन्मदिन आफूहरूको पनि विशेष दिन भएको भन्दै अर्जुन घिमिरेको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गरेका छन्। भद्रगोलको छायांकन सकेपछि केही विशेष पार्टी गर्ने सोच रहेको भन्दै उनले जन्मदिनको शुभकामना दिएका छन्।